News - ဝါယာကြိုးနည်းလမ်းနှင့်ဗို့အား၏စမ်းသပ်မှုအဆင့်များသည်စမ်းသပ်သူကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
ဝါယာကြိုးနည်းလမ်းနှင့်ဗို့၏စမ်းသပ်မှုအဆင့်ဆင့် tester ကိုဆီးတား
ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဗို့အားစမ်းသပ်သူဟုခေါ်သောယင်း၏လုပ်ဆောင်မှုအရလျှပ်စစ်ဓာတ်အား insulation strength tester, dielectric strength tester စသည်ဖြင့်ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ၎င်း၏အလုပ်နိယာမမှာ - ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သောဗို့အားထက်ပိုမိုမြင့်မားသော voltage ကိုစမ်းသပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများ၏ insulator တွင်အသုံးပြုသည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလနှင့်၎င်းအပေါ်သက်ရောက်သောဗို့အားသည်သာယိုစိမ့်သောစီးဆင်းမှုကိုသာဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ စမ်းသပ်မှုစနစ်တွင် module သုံးခုပါဝင်သည်။ Programmable power supply module၊ signal ရယူခြင်းနှင့်အေးစက်သည့် module နှင့် computer control system တို့ဖြစ်သည်။ voltage tester ၏အညွှန်းနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ ကြီးမားသော output voltage နှင့်ကြီးမားသော alarm current တို့ဖြစ်သည်။
voltage tester ကိုခံနိုင်သည့် wiring method:
၁။ withstand voltage tester ၏ main power switch သည်“ off” အနေအထားတွင်ရှိကြောင်းစစ်ဆေးအတည်ပြုပါ
၂။ တူရိယာ၏အထူးဒီဇိုင်းမှအပအခြားအားသွင်းပစ္စည်းများမပါ ၀ င်သောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းအားလုံးအားယုံကြည်စိတ်ချစွာ grounded လုပ်ထားရမည်
၄။ စမ်းသပ်ထားသည့်ပစ္စည်း၏ပါဝါခလုတ်များနှင့် relay များအားလုံးကိုပိတ်ပါ
၆။ ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် voltage tester ၏မြင့်မားသော voltage output လိုင်း (များသောအားဖြင့်အနီရောင်) ကိုစစ်ဆေးနေသော equipment ၏ power input terminal သို့ဆက်သွယ်ပါ
၇။ ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် voltage tester ၏ circuit grounding (များသောအားဖြင့်အနက်ရောင်) ကိုစမ်းသပ်နေသော equipment ၏မသန်စွမ်းသော metall အစိတ်အပိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
၈။ withstand voltage tester ၏ main power switch ကိုပိတ်ပြီး tester ၏ဒုတိယ voltage ကိုလိုအပ်သောတန်ဖိုးသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းမြှင့်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်သည် ၅၀၀ V / sec ထက်မပိုစေရ
၁၁။ ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် voltage tester ၏ main power switch ကိုပိတ်ထားပါ။ ပထမ ဦး စွာ withstand voltage tester ၏ voltage မြင့် output line အား disconnect လုပ်ပါ။ ထို့နောက် withstand voltage tester ၏ circuit ground wire ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။
* စာမေးပွဲစစ်ဆေးရန်နေရာတွင် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသောအခွင့်အာဏာရှိသူများသာသတ်မှတ်နိုင်သည်
* အန္တရာယ်ရှိသောenteringရိယာအတွင်းသို့အခြား ၀ န်ထမ်းများ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်စမ်းသပ်areaရိယာတဝိုက်တွင် Fixed နှင့်ထင်ရှားသောသတိပေးသင်္ကေတများကိုထားရမည်
* စမ်းသပ်နေစဉ်အော်ပရေတာအပါအ ၀ င် ၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်စမ်းသပ်ကိရိယာနှင့်စမ်းသပ်နေသည့်ကိရိယာများမှဝေးဝေးနေရမည်
၁။ the voltage voltage tester ၏“ voltage regulation” ဘူးသီးသည်အဆုံးသို့လက်ယာရစ်ဖြင့်လှည့်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ မရရှိလျှင်၎င်းကိုအဆုံးသို့လှည့်ပါ။
2. တူရိယာ၏ပါဝါကြိုး၌ Plug နှင့်တူရိယာ၏ပါဝါ switch ကိုဖွင့်။
၃။ သင့်လျော်သော voltage range ကို Select လုပ်ပါ။ voltage range switch ကို“ 5kV” နေရာတွင်ထားပါ။
၄။ သင့်လျော်သော AC / DC ဗို့အားတိုင်းတာသည့်ဂီယာကိုရွေးချယ်ပါ -“ AC / DC” switch ကို“ AC” အနေအထားသို့သတ်မှတ်ပါ။
၅။ သင့်လျော်သောယိုစိမ့်မှုလက်ရှိအကွာအဝေးကိုရွေးပါ။ ယိုစိမ့်နေသောလက်ရှိအကွာအဝေးခလုတ်ကို“ 2mA” နေရာတွင်ထားပါ။
၆ ။ switch ကို "test" အနေအထားကိုချိန်ညှိပြီးပြောင်းရန်။
၇။ အချိန်ကာလချိန်ညှိခြင်း -“ အချိန်ကိုက် / လက်စွဲ” ခလုတ်ကို“ အချိန်” အနေအထားသို့ပြောင်းပါ၊ အချိန်ကာလ dial ခလုတ်ကိုညှိပြီး“ ၃၀″ စက္ကန့်” သို့သတ်မှတ်ပါ။
၈။ တူရိယာ၏ AC voltage output terminal သို့မြင့်မားသောဗို့အားစစ်ဆေးမှုလှံတံကိုထည့်ပါ၊ အခြားအနက်ရောင်ဝါယာကြိုး၏ချိတ်ကိုတူရိယာရှိအနက်ရောင် terminal (ground terminal) နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
၉။ မြင့်မားသောဗို့အားစစ်ဆေးမှုလှံတံ၊ မြေပြင်ဝါယာကြိုးနှင့်စမ်းသပ်ထားသောကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်ပါ (အကယ်၍ ကိရိယာကိုစမ်းသပ်နေပါကအထွေထွေဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းမှာ - အနက်ရောင်ကလစ် (မြေအဆုံး) ကိုစမ်းသပ်ထားသည့်ပါဝါကြိုးကြိုး၏အောက်ဆုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးအခြား plug (L သို့မဟုတ် n) နှင့် high-voltage end ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ တိုင်းတာသောအစိတ်အပိုင်းများကို insulator တွင်စားပွဲစားပွဲပေါ်တွင်ထားသင့်သည်။
10. တူရိယာ setting ကိုနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်စမ်းသပ်စတင်ပါ။
၁၁။ တူရိယာ၏“ start” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ဗို့အားတိုးမြှင့်မှုကိုစတင်ရန်“ ဗို့အားစည်းမျဉ်း” ခလုတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းချိန်ညှိပါနှင့် voltmeter ရှိဗို့အားတန်ဖိုးကို“ 3.00 V kV” သို့ရောက်အောင်စစ်ဆေးပါ။ ဤအချိန်တွင်ယိုစိမ့်နေသောလက်ရှိမီတာ၏လက်ရှိတန်ဖိုးသည်လည်းမြင့်တက်နေသည်။ အကယ်၍ ဗို့အားမြင့်တက်ချိန်အတွင်းယိုစိမ့်နေသောလက်ရှိတန်ဖိုးသည်သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုး (1.5mA) ထက်ကျော်လွန်ပါကတူရိယာသည်အလိုအလျောက်နှိုးစက်နှင့်ထွက်ရှိမည့်ဗို့အားကိုဖြတ်ပစ်လိမ့်မည်။ တိုင်းတာထားသောအစိတ်အပိုင်းသည်အရည်အချင်းမပြည့်မှီကြောင်းညွှန်ပြပါက၊ မူရင်းပြည်နယ်။ အကယ်၍ ယိုစိမ့်သောလက်ရှိသတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးထက်မကျော်လွန်ပါက၊ တိုင်းတာထားသောအစိတ်အပိုင်းသည်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းညွှန်ပြကာ၊
၁၂။“ အဝေးထိန်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု” နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါ။ ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်လှံတံပေါ်ရှိအမာခံလေကြောင်းပလပ် ၅ လုံးကိုတူရိယာရှိ“ အဝေးထိန်း” စမ်းသပ်မှုအဆုံးတွင်ထည့်ပြီးစမ်းသပ်တံတောင်ပေါ်ရှိခလုတ်ကို (နှိပ်ရန်) ကိုနှိပ်ပါ ။ Plug Socket ဟုလည်းလူသိများသော Aviation Plug ကိုလျှပ်စစ်ဆားကစ်အမျိုးမျိုးတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုပြီး circuit များချိတ်ဆက်ခြင်း (disconnecting) ၏အခန်းကဏ္playsတွင်ရှိသည်။
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Shenzhen Meiruike Electronic Technology Co. , Ltd. Featured ထုတ်ကုန်များ, Sitemap, High-Voltage ဒီဂျစ်တယ်မီတာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်အမြင့်ဗို့အားမီတာ, ဗို့အားမီတာ, မြင့်မားသောဗို့အားစံကိုက်ညှိမီတာ, မြင့်မားသောဗို့အားမီတာ, 1000v- 40kv ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာ, ထုတ်ကုန်အားလုံး